Itaosy : Zaza tsy ampy taona tratra namaky trano
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → février → 4 → Itaosy : Zaza tsy ampy taona tratra namaky trano
Redaction Midi Madagasikara 4 février 2014 Faits-Divers : Itaosy ;Cité ;jiolahy
Tamin’ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny Cité Akany Sambatra eny Itaosy, zaza tsy ampy taona no tratra ambodiomby teo am-pamakiana trano. Tsy fantatra marina na tena nentin’ ny tsy fananana na koa fitia te hanandrakandrana no nanaovan’ity ankizy ity izao zavatra izao. Etsy andaniny koa anefa, maro dia maro amin’izao fotoana izao ireo voatavo tsy mifandraka lasa mpanedaka, na koa mpanao sinto-mahery manerana ny renivohitra. Ho an’ilay tratra, tsy afaka nihetsika moa izy io ka noraisim-potsiny teo. Vao voasambotra izy dia natolotry ny mpitandro filaminana avy teny an-toerana tamin’ireo mpiahy sy mpanitsy ny zaza tsy ampy taona. Any no hanaovana ny fakana am-bavany azy.
Fa mbola teny Itaosy ihany, teny Amberivatry, zaza menavava no hitan’ny olona narian-dreniny teny amoron-dalana. Ny marainan’ny alatsinainy no nisehoan’ity tranga ity. Efa tsy nisy aina intsony ilay zaza teny satria voalaza fa voa latsaka mihitsy dia napetraka teo amin’ny sisin-dalana. Ilay nahavanona ny loza kosa hatramin’izao, tsy hita izay misy azy. Tonga teny an-toerana ny manampahefana sy ny dokotera nanao ny fizahana ny razana ary tamin’ izany no nahafantarana fa vao niseho masoandro adiny roa na adiny telo teo ity zaza menavava ity izao nariana izao .
Amin’ny andavan’andron’ny fiainan’ny mponina eny Itaosy, voalaza fa faritra mena, lasa zavatra toa tsy mahataitra ny mponina intsony ny fanafihana sy ny fahitana fanariana zaza etsy sy eroa. Tsy lazaina intsony ny asan-jiolahy hafa.